Umthandazo kuSanta Muerte ngomsebenzi. ? Umsebenzi kwiiyure ezingama-24!
Umthandazo kuSanta Muerte ngomsebenzi Unamandla amakhulu.
Isebenza kakhulu ukuba ufuna umsebenzi ngokungathi ufuna ntoni ukusombulula ingxaki ethile eboniswayo kuwe kwindawo osebenza kuyo.
Amandla amabi esiwavayo, ngamanye amaxesha, kwindawo yethu yokusebenza ayamabi kwaye anokuchaphazela oogxa bethu, abaphathi kunye nathi ngqo okanye ngokungathanga ngqo.
1 Umthandazo kuSanta Muerte ngomsebenzi
1.1 Ngaba ukufa okungcwele kunamandla?
1.2 Ngaba kuyingozi ukutsho lo mthandazo?
1.3 Ndingawenza nini umthandazo wokufa okungcwele ngenxa yomsebenzi?
Sithandwa sam endimthandayo oswelekileyo, ndiyakucela ngala mazwi kuba ndifuna uncedo lwakho.
Emsebenzini ndizifumana ndihamba kwiingxaki ezenza ukuba ndithandabuze ukusisigxina.
Ndikhe ndaba lixhoba lokudlwengula kunye nomona ofuna ukundibona ndisezantsi.
Ndiphila ngexesha elibi endifuna ukutshintsha kulo, ndifuna umsebenzi apho kungekho mona, apho izakhono zam ziqondwa khona kwaye zinokuma zibe ngcono. Ukunika usapho lwam intuthuzelo abayifunayo.
Ndicela ukuba ugcine umsebenzi wam, kwaye ukuba awukwazi. Ndincede ndenze engcono. Ndicela usuku endizoya nalo kudliwanondlebe.
Ndifuna ukufikelela kwiinjongo zam zobungcali ukuze ndizive ndizele.
Ndifuna umsebenzi ongcono, umvuzo olunge ngakumbi, wokuba injongo yam yobungcali ayinamda.
Ndifuna ukubonakala ndilungile. Yiyo loo nto ndiza kuwe, ukulunga kwakho namandla akho infinito ukuba iingxaki zam ndizishiya ezandleni zakho. Enkosi, ndiyabulela ngokungapheliyo, ndilikholwa lakho elithembekileyo.
Esi sigwebo sisetyenziswa ngala maxesha xa sisiya kudliwanondlebe lomsebenzi, xa sele sizofaka isicelo somsebenzi ebesisoloko sifuna, ukubuza oko kusinceda ukuba sifumane ukunyuselwa okanye ukunyuselwa umvuzo wethu, ukuba udlula ngexesha elinzima emsebenzini kunye neqabane, umphathi, umxhasi okanye umsebenzi.
Ngapha koko, lo mthandazo uza kukunceda yonke into enento yokwenza nendawo yokusebenza.
Ngaba ukufa okungcwele kunamandla?
Uhlonitshwe kakhulu iminyaka emininzi, ngakumbi ngabantu baseMexico.
Amakholwa aya esanda ngakumbi kwaye oku kubonisa kuphela amandla okufa oyiNgcwele.
Kukho abo bajonga ukuba ngumoya ombi kodwa oku kungenanto kwaphela xa sibona imimangaliso kunye noncedo oluye lwanikwa nguSanta kuye wonk 'ubani ohamba esiya kuye ekhangela indlela noncedo.
Ngaba kuyingozi ukutsho lo mthandazo?
Imithandazo Ngokwabo akukho nto iyingozi.
Nangona kunjalo, kulungile ukuzenza noxanduva olupheleleyo kuba amaxesha amaninzi sicela into engasilungelanga thina, umhlobo okanye ilungu losapho.
Imithandabuzo ingumbandela ovelayo kuba singena ngepesenti yeminyaka yokomoya apho kufuneka sazi ukuba sihamba njani kuba i-negative ibuthongo ifuna ababuthathaka elukholweni.
Ndingawenza nini umthandazo wokufa okungcwele ngenxa yomsebenzi?
Ngalo naliphi na ixesha, lo mthandazo uba sisixhobo sethu semfihlo ngalo lonke ixesha nokuba siphi na.
Abaninzi bacebisa ukuba benze isibingelelo okanye balungiselele imeko yangaphambi komthandazo kwaye oku kunokusinceda ukuba sijonge kwinto esiyenzayo.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba sazi ukuba ukuba asinayo le nto, umthandazo uyasebenza kwaye unamandla kuba senziwa ngokholo ukuba yiyo kuphela imfuno ekufuneka siyizalisekisile ngendlela esisinyanzelo.
Umthandazo onamandla kwaye onamandla kuSanta Muerte wothando olungenakwenzeka
Imithandazo emi-4 yokucela amandla eSpecial yeSyprian